HAIN-TRANO :: Menaka nanendasana mofo niteraka firehetana teny Faravohitra • AoRaha
HAIN-TRANO Menaka nanendasana mofo niteraka firehetana teny Faravohitra
Nijoalajoala ny lelan’afo teny Faravohitra, nandritra ny hain-trano niseho omaly vao maraim-be. Kila forehitra ny tranohazo iray niaraka tamin’ny trano biriky nisy efitra efatra.
Nambaran’ny loharanom-baovao avy amin’ny sampana mpamonjy voina fa tao amin’ilay tranohazo no niantombohan’ny afo noho ny fahaverezan’ny menaka nanendasana mofo. Tsy voafehy ary vetivety dia niitatra ny afo.
Tamin’ny dimy ora sy sasany maraina no nahazo antso filazana fisiana hain-trano ny mpamonjy voina etsy Tsaralalàna. Teny amin’ny biraony teny Tsaralalàna izy ireo dia efa nahatazana ny afo eny Faravohitra. Nantsoina hanampy tamin’izany ny mpamonjy voina eny Andravoahangy. Fiara lehibe efatra mpamono afo no niatrana teny amin’ny toerana nisian’ny firehetana. Eo amoron-dalana no misy an’ireo trano nirehitra.
Tsy nampananosarotra ny famonoana ny afo. «Notondrahana rano ihany koa ireo tranohazo teo amin’ny manodidina mba tsy hiitaran’ny afo. Tara kely ny fahatongavan’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny orinasa Jirama tokony hijery akaiky ny momba ny fisian’ny herinaratra. Na izany aza, niezaka namono sy namehy ny afo ihany », hoy ny avy amin’ny mpamonjy voina.
FAKANA AN-KERINY :: Nandoa iray tapitrisa ariary ny havan’ireo ankizy roa tany Malaimbandy
FANAFIHANA MITAM-PIADIANA :: Voasambotra indray ny lehiben’ny jiolahy iray